प्रहरीको हत्याका अनुत्तरित प्रश्न : त्यही दिन किन गएन सशस्त्रको गस्ती ?
कैलालीमा तस्करी रोक्न खोज्दा प्रहरीका असइ गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउद हत्याको घटनाले केही आशंका उब्जाएको छ।
प्रहरी हत्या प्रकरण : थप एक जना पक्राउ, पक्राउ पर्नेको संख्या १७ पुग्यो
प्रहरीले केराउ मटरका मुख्य तस्करलाई पक्राउ गरेको छैन। पक्राउपछि सार्वजनिक गरिएका ७ जना अधिकांश भरिया मात्रै पाइएको छ।
प्रहरीले मंगलबार धनगढी उप–महानगरपालिका १० का ३१ वर्षीय पर्कु भन्ने रोहित राना(क), सोही स्थानका २० वर्षीय राजेन्द्र राना, ३० वर्षीय चोर भनिने सुरेश राना, २५ वर्षीय गब्बर भन्ने राजकुमार राना, २२ वर्षीय रामनिवास राना, २९ वर्षीय टल्लु भन्ने दलराम राना र २५ वर्षीय गोपाल भन्ने रामगोपाल रानालाई सार्वजनिक गरेको थियो।
जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रतीक विष्ट शनिबार राति १० देखि ११ बजेको बीचमा असइ विक र जवान साउदको हत्या भएको अनुमान गर्छन्। दुवै जना राति १० बजेदेखि नै सम्पर्कविहीन भएका थिए। तर, त्यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइतबार बिहान १० बजे मात्रै खबर गरिएको थियो। माथिल्लो निकायमा समयमै किन खबर गरिएन ?
सामान्यतः गस्तीमा रहेका हवल्दारसँग वाकेटोकी हुन्छ। असइको टोलीसँग नहुने कुरै भएन। संवेदनशील क्षेत्रमा दुई जना मात्रै गस्ती गएका बेला असइ विकले माथिल्लो निकायमा जाहेर गरेका होलान्। केही परिहाले आकस्मिक टोलीका लागि कुरा गरे होलान्। तर, प्रहरी यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर पन्छिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका डीआईजी उत्तम सुवेदी यसबारे बोलेका छैनन्।
सीमा नाकामा हुने चोरी तस्करी र आपराधिक गिरोह समात्न जाने क्रममा स्थानीय कमान्डरले माथिको कमान्डरलाई जानकारी वा सूचना दिने फोर्सको ‘चेन अफ कमान्ड’भित्रै पर्छ। त्यसो हो भने ब्याक फोर्स किन गएन ?
दुई प्रहरी हत्या घटनास्थलको पूर्व र पश्चिम सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा बीओपी छन्। पूर्वतर्फको बीओपीको दूरी झन्डै एक किमि मात्रै छ। तर, त्यस रात सशस्त्र प्रहरी गस्तीमा गएको देखिँदैन। ‘संयोग हो वा जानी–जानी हो थाहा भएन।
दुई दिनदेखि बेपत्ता प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको शव फेला
अपडेट : असई गोविन्द बिकको हत्या गर्ने गिरोह पक्राउ, पक्राउ पर्नेको संख्या १६ पुग्यो
असई विक हत्या प्रकरण : हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन
अपडेट : धनगढीमा हत्या गरिएका असई विकका आफन्तले बुझे शव
धनगढी असई गोविन्द बिक हत्या प्रकरण : थप २ जना पक्राउ, पक्राउ पर्नेकाे संख्या १३ पुग्याे
यस कारण मारिएका रहेछन प्रहरीका असई गोविन्द विक, खुल्यो रहस्य !
असई हत्या प्रकरण अपडेट : हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली घेराउ
कैलाली प्रहरी (असई) विक हत्या प्रकरण : ११ जना पक्राउ, वेपत्ता हवल्दारको खोजी जारी
असई गोविन्द विकको घाटी रेट्ने तस्कर कि प्रहरी जवान ?
अपडेट : प्रहरी असईको तस्करद्वारा घाँटी रेटेर हत्या
धनगढीमा ड्युटीमा खटेका असई मृत फेला, एक जवान बेपत्ता
यसरी पक्राउ परे नक्कली परीक्षार्थी
नेपाली सेनामा भर्ना हुन अर्कैले दिए परिक्षा